क्यालिब्रेसन तौल कसरी छनौट गर्ने?
तौल किन्नको लागि हामीले के ध्यान दिनुपर्दछ? तल धेरै बिन्दुहरू छन्: १. शेष र मापनको शुद्धता अनुसार जुन तपाईंलाई क्यालिब्रेट गर्न आवश्यक पर्दछ। उच्च वर्ग तौलको उच्च शुद्धता हुनेछ, तर यदि यो सुतालबे होईन भने यसले केवल लागत बढाउँदछ। र तल्लो वर्ग वजन ...
किलोग्रामको विगत र वर्तमान
एक किलोग्राम तौल कति छ? वैज्ञानिकहरूले सयौं बर्ष देखि यो जस्तो देखिन्छ साधारण समस्या अन्वेषण गरेका छन्। १ 17 95 In मा, फ्रान्सले एक कानून जारी गर्‍यो जसमा "ग्राम" लाई "एक घनमा पानीको निरपेक्ष तौलको रूपमा परिभाषित गर्‍यो जसको खण्ड तापक्रममा एक सय मिटर जति बराबर छ भने ...
फोल्डेबल वेटब्रिज - नयाँ डिजाइन जुन चलको लागि उपयुक्त छ
JIAJIA इन्स्ट्रुमेन्ट घोषणा गर्न उत्साहित छ कि अब हामीसँग सबै आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरूको साथ फोल्डेबल वेटब्रिजको उत्पादन र व्यवसायीकरणको इजाजतपत्र छ। फोल्डेबल पोर्टेबल ट्रक स्केल धेरै पक्षहरूमा आदर्श मापन हो, र यसले टीका लागि धेरै सुविधाहरू र फाइदाहरू रहेको छ। ।
जियाजियाले फेरि २०२० मा इन्टरवेजिंग उद्योग प्रदर्शनीमा भाग लियो। महामारीको कारण, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूले वार्षिक उद्योग कार्यक्रममा भाग लिन सकेनन, हामी अझै नयाँ प्रदर्शनी सहित इन्टरनेट मार्फत प्रत्येक ग्राहकलाई प्रदर्शनीको जानकारी दिन्छौं ...
वजन क्यालिब्रेसनका लागि नयाँ ब्यालेन्स
२०२० एउटा विशेष वर्ष हो। COVID-19 ले हाम्रो काम र जीवनमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याएको छ। डाक्टरहरू र नर्सहरूले सबैको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान दिएका छन्। हामीले महामारी विरुद्ध लड्न चुपचाप योगदान गरेका छौं। मास्कको उत्पादनलाई टेन्सिल परीक्षणको आवश्यक पर्दछ, त्यसैले टेको लागि माग ...
मापन क्यालिब्रेसन तौल, क्यालिब्रेसन मास, प्रमाणित तौल, शियर बीम लोड सेल, क्यालिब्रेसन तौल सेट, डिजिटल तराजूका लागि क्यालिब्रेसन तौल,